Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Anderson Talisca Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara nke ọma dịka Talisca. Maerson Anderson Talisca Child Akụkọ nke a na-eme ka ị ghara ịkọ akụkọ zuru oke site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere agbapụ ya na mmecha ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Anderson Talisca nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Anderson Talisca Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Anderson Souza Conceicao a mụrụ na 1st ụbọchị nke February 1994 na Feira de Santana na Bahia, Brazil. A mụrụ ya Ivone da Silva na nna ya Augusto Carlos.
N'ịbụ onye tolitere na Feira de Santana, nwa agbọghọ Talisca nwere mmalite mmalite nke ndụ n'ihi nkewa nne na nna ya mgbe ọ dị naanị afọ ise. N'ihi ya, ihe egwuregwu football toro na nne na nna ya n'oge dị iche iche.
Nke mbụ bụ nna ya, Augusto onye ya na ya biri ruo mgbe ọ gbanwere 11. Talisca mechara soro nne nne ha biri na nne ya, Ivone. Brazillian ga-emesịa kọwaa oge ahụ dịka oge kachasị sie ike na ndụ ya site na ịnye nghọta banyere otu ọ siri mee.
"Anọrọ m ruo afọ 11 na Feira, nna m na nne nne m (Ana)," Site na 11 ruo 13 afọ, mụ na nne m biri n'otu ugbo (nke Sao Jose) dị nso na Feira de Santana. Ọnọdụ ahụ dị nnọọ njọ, nne m enweghị ike ị nweta ezigbo ọnọdụ obibi, n'ihi ya, ebiri m ntụ ọka, achịcha na ihe ọ juiceụ juiceụ, agụụ na-agụ m n'ezie ".
N'agbanyeghị ọnwụnwa na ihe isi ike nke oge a, Talisca jigidere mmasị nwata ya maka ịgba bọọlụ, bido na Feira de Santana Children's Support Foundation (FAMFS), ebe eji aha otutu "Doda" mara ya.
Anderson Talisca Child Story - Ọrụ Buildup:
Nkwụsị mbụ na ọrụ Talisca na-ewuli elu na football bụ isi ya na Astro Community Sports Association, ụlọ ọrụ ọzụzụ na mmekorita ya na Feira de Santana Children's Support Foundation.
Raul Jimenez Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Ihe
Ọ bụ na etiti ka Talisca gosipụtara nnukwu arụmọrụ. N'ihi ya, ọ nọ na 2007 mgbe ọ dị afọ 13, kpọrọ ya ka ọ zụọ na Vasco da Gama site n'aka Alvaro Miranda, nwa onye isi oche-ahọpụtara n'oge ahụ, Eurico Miranda. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, Alvaro ga-echeta ọnọdụ ndị dugara ya n'ịza oku ọkpụkpọ na Talisca n'ụzọ ndị a.
“Ezutere m Talisca n’oge asọmpi iko na Bahia. Ahụrụ m ya ka ọ na-egwu bọl n'ọhịa, ụdị ya masịrị ya. M bịaruru ya nso wee jụọ ya aha ya, afọ ya na ọ ga-achọ ịzụ na Vasco. Talisca kwuru ee. Ihe dị ka ọnwa abụọ, ọnwa atọ mgbe nke ahụ gasịrị, na njedebe nke afọ, ọ pụtara na njikere na Sao Januario. Hisnụ ọkụ n'obi ya maka egwuregwu ahụ tụrụ m n'anya. ”
Otú ọ dị, ọnụnọ Talisca na Vasco dị mkpụmkpụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na a jụrụ ya ebe na ụlọ Rio de Janeiro. N'ikwu okwu banyere mmepe Álvaro kwuru na:
“Mgbe nna m hapụsịrị onye isi ala, ndị njikwa ọhụrụ weghaara ihe omume ụlọ ọrụ ahụ ma anyị mechara tufuo Talisca. Onye ọ bụla kpọrọ ya onye nwere obi ụtọ. ”
N'otu aka ahụ Newton Motta, onye nduzi mbụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ na-ekwu na e mechapụrụ ihe egwuregwu football n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị ohere ọ bụla iji mee ya.
Anderson Talisca Biography - Bilie Iji Mara Aha:
N'ịga n'ihu na a jụrụ ya, a nakweere Talisca a na-apụghị ịkọwapụta ya n'otu obere osisi dị na Salvador dị ka Esporte Clube Bahia. Mgbe Bahia, onye toro eto na-eto eto n'oge ahụ bilitere n'ọtụtụ agụmakwụkwọ ahụ ma gụọ akwụkwọ na 2013.
E mechara tọọ Talisca na squad squad nke Bahia ebe o mere ka ndị ọkachamara ya na ndị Kọrint na 7th nke July 2013 wee merie ihe mgbaru ọsọ mbụ ya na egwuregwu na-esote São Paulo.
Ọ bụ ezie na Talisca dị ka onye na-anọchite anya ya n'oge mbụ, ọ dị mma iji nlezianya kpee uche site n'inyere aka ya aka merie Bahia State Championship, mmepe nke mere ka ndị na-agụ akwụkwọ na Benfica na-aga ngwa ngwa ịbanye na nwata ahụ.
N'ịga Benfica, Talisca kwụghachiri mmasị nke ụlọ ọgbakọ ahụ site na ya site na ịchọta ihe mgbaru ọsọ mmeri maka akụkụ ya n'oge oge 2014-15 yana oge 2015-2016. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwunye Anderson Talisca - Anna Paula Ramos:
Talisca na-enwe mmekọrịta di na nwunye na nwunye ya a maara dị ka Anna Paula Ramos.
Di na nwunye bi na 2014 bi na Portugal dị ka lovebirds, na-eleghara ibe ha anya mgbe ọ bụla Talisca mara ụlọikwuu na Algarve, na-ahapụ obi ya na Lisbon.
Otú ọ dị, ha mere mkpebi ịbịaru nso ruo mgbe ebighị ebi site n'ịlụ di na 6th nke June 2015 n'oge ememe e mere na Bahia, Brazil.
Enwere mmekọrịta ha na ụmụaka abụọ, nwa nwanyị, Maria Laura (a mụrụ August 2016) na nwa nwoke, Samuel Davi (Amụrụ na February 2018).
Anderson Talisca aha otutu:
Ọtụtụ ndị abịawo na-ele ọkachamara ọgụgụ isi dị ka "Talisca" n'amaghị na aha ahụ bụ n'ezie mmetụta ịhụnanya nke ndị Fans, ndị otu na ndị na-achọ ya nyere ya n'oge ọ nọrọ na Esporte Clube Bahia. Talisca nke akpọrọ "Talişka" sụgharịrị ịbụ 'Beanpole', nke na-ezo aka na Brazillian toro ogologo.
Tụkwasị na nke ahụ e kwuru na mbụ, aha Talisca bụ "Yaya Talisca" n'oge ọ nọ na Benfica maka ọdịdị ya IYia Toure vorian.
Eziokwu Anderson Talisca - Nkọwa na Rivaldo:
Talisca anọwo oge karịa tụnyere Brazillian Legend Rivaldo. Ọtụtụ kwenyere na Talisca akpọrọ "The New Rivaldo" na-ekerịta myirịta na akụkọ ifo na mpaghara nke onye ọ bụla enweghị ike ịkọwa karịa ndị ọzọ Benfica njikwa Jorge Jesus. Dị ka Jorge si kwuo:
“Àgwà anụ ahụ na nkà na ụzụ Talisca yiri Rivaldo. Ọ bụ ya mere anyị ji bịanye aka na ya. Mgbe m hụrụ nwa nwoke ahụ, echere m ozugbo banyere Rivaldo, ”.
N'okpuru ebe a bụ vidio nke gosipụtara ọdịiche dị n'etiti ikike abụọ.
Anderson Talisca Eziokwu Eziokwu- Enweghị nsọpụrụ Site Benfica:
Ọ bụ ezie na Talisca hụrụ n'anya na Benfica, ọ hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ na Usoro ọjọọ banyere nkwenye nke ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ mgbe ọ dị ya mkpa.
“Enweghị m nkwanye ùgwù na Benfica. Bọchị isii nwa m nwanyị mụsịrị, a kwụrụ onye ọ bụla ụgwọ ma ewezuga m ”.
N'ịkọghachi azịza ahụ, onye nnọchiteanya Talisla bụ Nuno Oliveira kwukwara na:
"Mgbe a mụrụ nwa nwanyị ahụ, Benfica akwụghị ya ụgwọ, ego gwụrụ ya ma chọọ enyemaka nke ndị enyi. Ọ bụ afọ 22, ya na nwunye ya achọghị ịhapụ Portugal. Ha dabara nnọọ adaba, amụrụ nwa nwanyị ebe a. Ọ bụghị onye na-arụrụ onwe ya ọrụ, ọ na-eche banyere ọdịmma ezinụlọ. Ndị mmadụ na-eche na ọkpụkpọ bọọlụ dị iche na onye ọrụ ọzọ. Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ọ bụ njedebe nke ọnwa ma ụlọ ọrụ gị akwụghị gị ụgwọ? Ekwenyesiri m ike na ị ga-enwekwa nsogbu, mba?.
Talisca na-ewe iwe na-ahapụ iwe ya na Septemba 2016 site na isi megide Benfica maka Beşiktaş (otu ụlọ nke Benfica gbaziri ya). Talisca nwere ọyoụ na afọ ojuju na-abọ ọbọ ya site n'ịmezu ihe mgbaru ọsọ ya nke gbochiri Benfica mmeri Beşiktaş na UEFA Champions League na 13th nke September 2016.
Nke a mere ka ndị otu egwuregwu Talisca kpọrọ ya asị ma kpalie ndị na-akwado Benfica ịkpa ókè agbụrụ na ibe Instagram peeji nke nwunye ya.
Anderson Talisca Ndụ Nke Onwe:
Talisca bụ onye ọkpụkpọ nwere obi ụtọ hụrụ Chineke na ezinụlọ ya n'anya dị ka ọ pụtara n'ihu Jizọs Kraịst egbugbu na aka ekpe ya na ihu nwunye ya na nkwojiaka ya. Karịsịa, ọ hụrụ n'anya inyeghachi ma bụrụ onye ama ama maka inye $ 850 puku nke Benfica na-edebanye ego na Astro Community Sports Association ebe ọ na-ewere nzọụkwụ mbụ ya na football.
N'akụkụ nke ọdịdị ya, Talisca nwere ike ịdị na-emetụ ya mgbe ụfọdụ. Ka o sina dị, ọ bụ onye egwuregwu dị egwu nke kachasị mma.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Anderson Talisca Ụmụaka Akụkọ nke a na-akọkwa akụkọ banyere eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.